जनतासमाचार डट्कममा आज (शनिवार) प्रकाशित समाचारका मुख्य अंशहरू :
१.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निश्कासन गर्ने भएको छ । नेकपाको आइतवार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि निश्कासन गर्ने विषयमा छलफल हुने सम्भावना रहेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
२.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) काे स्थायी कमिटी बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । नेकपा केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिवार बसेकाे बैठकले स्थायी कमिटी बैठक आइतबारका लागि तय गरेकाे हाे । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिनुभएकाे जानकारी अनुसार स्थायी कमिटी बैठक आइतबार १२ : ३० बजे बस्नेछ ।
३. नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट बालकोट फर्किने पक्का भएको बताउनुभएको छ । मानव अधिकार तथा शान्ती समाजको २३औँ जिल्ला साधरणासभा तथा असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक तवरमा प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रतिगमनको सिलसिला विषयक गोष्ठिमा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटरबाट बालकोट र त्यसपछि दमक सर्ने पक्का भएको बताउनुभएको हाे ।
४. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले संविधानमाथिको प्रश्नमा वकिलहरु व्यावसायिक भनेर विचारबाट भाग्न नपाउने बताउनुभएको छ । शनिबार मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको संसद विघटन र समाजवादी क्रान्तिको मार्गचित्र विषयक अन्तर्सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य भट्टराईले वकिलहरु कुनै फौजदारी विषयको मुद्दामा लड्न स्वतन्त्र भएपनि संविधानको विषयमा व्यावसायिक धर्म भनेर जान नमिल्ने बताउनुभएको हो ।
५. एमबिबिएस कार्यक्रमको लागि शुल्क नबढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ । बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न पाचौं बैठकमा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
६.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले संविधानमाथिको प्रश्नमा वकिलहरु व्यावसायिक भनेर विचारबाट भाग्न नपाउने बताउनुभएको छ । शनिबार मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको संसद विघटन र समाजवादी क्रान्तिको मार्गचित्र विषयक अन्तर्सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै स्थायी कमिटी सदस्य भट्टराईले वकिलहरु कुनै फौजदारी विषयको मुद्दामा लड्न स्वतन्त्र भएपनि संविधानको विषयमा व्यावसायिक धर्म भनेर जान नमिल्ने बताउनुभएको हो ।
७.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पूर्व माओवादी लडाकूहरुसँग छलफल गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सशस्त्र द्धन्दको अवधिमा गरेको योगदान र त्यागको सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ । सो क्रममा उहाँले राजनीतिक रुपमै समस्याको वास्तविक समाधान गर्ने बताउदै विगतमा जस्तो धोका नहुने बताउनुभयो ।
८.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) काे स्थायी कमिटी बैठक आइतबार बस्ने भएको छ । नेकपा केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिवार बसेकाे बैठकले स्थायी कमिटी बैठक आइतबारका लागि तय गरेकाे हाे । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिनुभएकाे जानकारी अनुसार स्थायी कमिटी बैठक आइतबार १२ : ३० बजे बस्नेछ ।
९.बाग्मती सफाइ महाअभियानकाे आठ वर्ष पुगेकाे छ । अभियानकाे ४०२औँ साता मनाइरहँदा नदीकाे किनारका फाेहाेरहरू एकदिन उठाइन्छन् तर भाेलिपल्टदेखि उस्तै देखिदै आएको छ । नदी सफा बनाउने एकमात्र उपाए नदीमा फाेहाेर तथा फाेहाेर जन्य पदार्थ नफाल्नु नै हाे । फाेहाेर नफाल्ने अभियानभन्दा पनि फाेहाेर उठाउने अभियान सञ्चालन भइरहेकाले सातामा एकदिन केही सफा देखिएपनि अर्काे दिनदेखि उस्तै देखिन्छ । सफाइ महाअभियान विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि शुरु भएको हो ।
१०.स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्थापनका लागि सात वटै प्रदेशमा संयोजक तोकेको छ । खोप अभियानलाई व्यवस्थित बनाउन र खोपको उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा संयोजक तोकेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ १४ गतेबाट देशभर खोप अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनुभएको छ ।
११.पाकिस्तानमा रेलको ठक्करबाट एक युवाको मृत्यु भएको छ । टिकटक बनाउनको लागि रेलमार्गमा हिँडिरहेका १८ वर्षीय हमजा नाभेदको रेलको ठक्करबाट मृत्यु भएको हो । पाकिस्तानको राजधानी शहर इस्लामाबाद नजिकै शाह खालिदको छिमेकमा पर्ने रावलपिंडी शहरमा शुक्रबार दुर्घटना भएको जनाइएको छ ।
१२. विगतका वर्षमा झैँ यस वर्ष पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि यही माघ १६ गतेसम्म सप्ताहव्यापीरूपमा शहीद दिवस मनाउन शुरु गरेको छ । टेकूकाे मचलीस्थित शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिइएको स्थानमा श्रद्धाञ्जलिसभा गरी शहीद सप्ताहकाे सुरूवात गरिएको हाे ।
१३.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध बालुवाटार मार्च हुने भएको छ । ओलीको प्रतिगमनलाई चुनौति दिन ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ ले बालुवाटार मार्च गर्न लागेको हो । बृहत् नागरिक आन्दोलनको तर्फबाट युग पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार माघ १२ गते हुने बालुवाटार मार्चमा कवि, लेखक, कलाकर्मी, संगीतकर्मी, बौद्धिक पेशाकर्मी तथा सचेत नागरिकमा सहभागिताका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
१४. गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक हिँड्नु भएका खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई मेलम्चीबाट प्रवेश गर्न रोकिएको छ । कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न गृहजिल्ला हिँड्नुभएका मन्त्री तामाङलाई इन्द्रावती गाउँपालिका-४ टाकुरेमा स्थानीयले रोकेका हुन् । बीच बाटोमै रूख ढालेर स्थानीयले गाडी प्रवेश गर्ने बाटो नदिएपछि मन्त्री तामाङ चार घण्टादेखि मेलम्ची बजारमा रोकिनुभएको छ ।
१५.पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मिर्चैया नगरपालिका– ५ जिवा पुलमा अज्ञात समूहले राखेको कुकर बम सुरक्षाकर्मीले डिसपोज गरेको छ । चोहर्वास्थित नेपाली सेनाको श्रीशेर गणबाट खटिएको डिस्पोजल टोलीले कुकर बम डिसपोज हो ।
१६.हामी प्याजको बोक्रालाई फोहोर सम्झेर फाल्दिन्छौँ । हामी अधिकांश मानिस प्याजको बोक्राको फाइदाबारे अनविज्ञ छौँ ।प्याजको बोक्रामा अत्याधिक पोषक तत्व पाइन्छ, जसले हाम्रो स्वास्थ्यका साथसाथै छालालाई सुन्दर बनाउन पनि सहयोग पुग्छ । भिटामिन ए, सी, इ र कयौँ एन्टीअक्सीडेट्सले भरिपूर्ण प्याजको बोक्रामा एन्टीइफ्लेमेट्री पनि पाइन्छ । प्याजको बोक्रामा क्वेरसेटिन उच्च मात्रामा पाइन्छ, जसले रक्तचाप कम गर्न र धमनी सफा गर्न मद्दत पुर्याउँछ। यसले हृदयघातको जोखिम कम गर्दछ।
१७.कावासोतीमा भएकाे मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । कावासोतीको भित्री सडकखण्डमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको हो । कावासोतीस्थित डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरदेखि पूर्वपट्टिबाट दक्षिणतर्फ जाने भित्री बाटोमा मोटरसाइकल दुर्घटना भएको नवलपुर प्रहरी प्रमुख एसपी प्रकाश मल्लले बताउनुभयो ।
१८. बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजातिको संक्रमण पहिलेको भन्दा धेरै खतरनाक भएको बताउनुभएको छ । पछिल्लो समय बेलायतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र मृत्यु दर बढिरहँदा प्रधानमन्त्री जोन्सनले नयाँ भाइरस झन् खतरा भएको बताउनुभएको हो ।
१९.नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालाले मुलुकमा राजनीतिक अवस्था अस्थिर हुँदै गएकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको बताउनुभएको छ । महेन्द्रनगरमा शुक्रवार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले कम्युनिष्ट पार्टी फुटी नसकेको र निर्वाचन आयोगले दिने चुनाव चिन्हलगायतका कारणले निर्वाचन हुने स्पष्ट नरहेकाले राजनीतिक अवस्था अस्थिर हुँदै गएकाे बताउनुभएकाे हाे ।
२०.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय गर्ने हरेक भाषण व्यक्ति केन्द्रीत हुने र व्यक्तिका बारेमा टिका-टिप्पणी गरेर आफ्ना समर्थकलाई हँसाउने गर्दै आउनुभएको छ । खासगरी आफूसँग असहमत हरेक व्यक्ति ओलीको निशानामा पर्ने गरेका छन् ।
२१. सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ महिनामा ३९ हजार ३ सय बढी सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने ३९ हजार ३ सय ९३ सवारी साधन कारवाहीमा परेका सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जानकारी दिएको छ ।
२२.प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विवाह आइतबार सम्पन्न हुँदैछ । मुख्यमन्त्री राई बौद्ध निवासी मोडल ज्याङ्मु शेर्पासँग विवाह बन्धनमा बाँधिन लाग्नुभएको हो । विवाहको अवसरमा काठमाडौंको नक्सालस्थित एलिस रिसेप्शनमा प्रीति भोजको आयोजना गरिदैछ ।
२३.हेटौंडामा जारी छैटौँ हेटौंडा भेट्रान्स कप एट ए साइड फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि डिफेन्डिङ च्याम्पियन बगरभाइ खलक पोखराले जितेको छ । शनिबार भएको फाइनल खेलमा बगरभाइले १–० अन्तरमा पराजित गरेको हो । खेलको दोस्रो हाफको ४० औं मिनेटमा बगरभाइ खलकका मनोज गुरुङले गरेको गोलनै निर्णायक बन्यो । खेलको म्यान अफ द म्याच बगरभाइका नरेश श्रेष्ठ घोषित भए ।
२४. प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश नं १ मा पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गर्ने बताउनु भएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले आफूहरुले प्रतिपक्षीको धर्म निभाउने बताउँदै प्रदेश १ मा अविश्वासको पक्षमा भोट गर्ने बताउनु भएको हो । नेता पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सत्तापक्षसँग नमिलेको दावी समेत गर्नुभयो ।
२५.उर्लाबारी नगरपालिकामा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । उर्लाबारी–२ सिरुझार बस्ने ५० वर्षीय डिक बहादुर राईलाई शुक्रबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनलाई ३५ वर्षीया श्रीमती दिलमाया राईलाई बञ्चरो प्रहार गरी हत्या गरेको आरोप लागेको प्रहरीले जनाएको छ ।
२६. नेपालमा थप दुई सय ३२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा तीन हजार पाँच सय ४१ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा दुई सय ३२ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या दुई लाख ६९ हजार एक सय ८० पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा तीन सय ६८ जना कोरोनाका बिरामी निको भएका छन् ।
२७.एमबिबिएस कार्यक्रमको लागि शुल्क नबढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ । बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न पाचौं बैठकमा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
२८.राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगिताबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश बारिरिएको छ । मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशसँग ६ विकेटले पराजित भएको सुदूरपश्चिम बाहिरिएको हो । तीन खेलबाट दोस्रो जित निकालेको लुम्बिनीले अघिल्लो चरणको यात्रालाई जिवन्त राख्दा हारेको सुदूरपश्चिमले लगातारका तीन खेलमा पराजय भोग्दै जारी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । सुदूरपश्चिमको एक खेल भने अझै बाँकी छ ।
२९. काठमाडाैं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सहिदकाे याेगदानका कारणा नेपालमा गणतन्त्र आएकाे बताउनुभएकाे छ । टेकु पचलीस्थित शहिद शुक्रराज शास्त्रीको शालिकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मेयर शाक्यले पारिवारिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको शासकीय शक्ति जनताका हातमा पुर्याउन बलिदानी दिने सहिदको योगदानका कारण नेपालमा गणतन्त्र आएकाे बताउनुभएकाे हाे ।